ओमान भ्रमणमा नेपालका पाँच सकरात्मक पक्ष | Hamro Khelkud
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – आइसिसी विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत नेपाल, अमेरिका र ओमानसँग त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिजमा नेपालले औसत प्रदर्शन गरेको छ । त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले ओमान र अमेरिकासँग समान एक एक खेलमा जित र हार बेहोर्न पुग्यो ।
नेपालको प्रदर्शन अपेक्षा अनुसार रहन सकेन । ब्याटिङ अपेक्षा अनुसार हुन सकेन । गत वैशाखमा भएको टि२० त्रिकोणात्मक सिरिजपछि टोलीबाट ब्याटिङमा बढी आशा राखेको थियो । तर ओमान भ्रमणको पहिलो खेलमै पपुवा न्युगिनीविरुद्ध १ सय ३५ रनको सामान्य विजयी लक्ष्य पछ्याउनेक्रममा पूरा गर्न ८ विकेट गुमाउँदै संघर्ष गरेको थियो । पहिलो खेलकै संघर्षले टोलीलाई पूरै खेलमा मनोबल बढाएको थियो । नेपालले जितेका चार खेलनै उत्कृष्ट बलिङ प्रमुख कारण थिए ।
अन्तिम खेलमा नेपालले राम्रो पूनरागमन गर्दै ओमानलालई पराजित गर्यो । मुख्य प्रशिक्षक डेभ ह्वाटमोरलाई नेपालले जितका साथ सुखद बिदाई गरेको थियो । लगातार दुई हारपछि नेपालले उत्कृष्ट पूनरागमनका साथ जित निकालेको थियो । यसअघि ओमानविरुद्ध मनोबल कमजोर रहन्छ भन्ने आरोपलाई गलत सावित गर्यो । ओमानबाट नेपालले थुप्रै पाठ सिकेको छ । नयाँ उर्जा र सम्भावना देखाएको छ । ओमानमा नेपालका सकरात्मक र कमजोरी दुवै रहे । त्यसमा ओमान भ्रमणमा नेपाली टोलीमा देखिएको पाँच सकरात्मक पक्ष
५. सन्दीपको लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन
सन्दीप नेपाली टोलीका प्रमुख खेलाडी हुन् । उनीबाट नेपालले सधैं उच्च प्रदर्शनको अपेक्षा राख्छ । नेपालको चारै जितमा सन्दीप नायक बने । पिएनजीलाई पहिलो खेलमा सस्तैमा समेट्न सन्दीपले पहिलो खेलमा १० ओभरमा ३५ रन खर्चेर ४ विकेट लिदै प्लेयर अफ द म्याच चुनिए । दोस्रो खेलमा नेपाललाई १ सय ५१ रनले विजयी गराउन सन्दीपले ५.१ ओभरमा ११ रन खर्चेर ६ विकेट लिएका थिए ।
अमेरिकालाई पाँच विकेटले पराजित गर्दा सन्दीपले दुई विकेट लिएका थिए । ओमानसँगको पहिलो खेलमा पेटमा समस्याको कारण उनले बलिङ गर्न सकेनन् । अमेरिकासँग दोस्रो खेलमा दुई विकेट लिँदा अन्तिम खेलमा ओमानलाई पराजित गर्न चार विकेट लिएका थिए । सन्दीपबाट नेपालले जस्तो अपेक्षा राखेको थियो त्यस्तै प्रदर्शन गरे । अन्य बलर चल्न नसक्दा दबाबमा पनि सन्दीपले उच्च प्रदर्शन गरेका थिए ।
४. ब्याटिङमा युवा खेलाडीले देखाएको नयाँ आशा
ओमान भ्रमणमा नेपाली युवा खेलाडीको प्रदर्शन उच्च रह्यो । नेपाल युवा खेलाडीमा निर्भर छ । ओमान भ्रमणबाट नेपालका आसिफ शेख, कुशल भुर्तेल र रोहित कुमार पौडेलले ओमान भ्रमणमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सफल रहे । कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, विनोद भण्डारी र शरद भेषावकर टोलीमा रहेका अनुभवी खेलाडी हुन् । ज्ञानेन्द्रले पछिल्ला दुई खेलमा लगातार अर्धशतकका साथ राम्रो लयको संकेत दिए । विनोद भने अपेक्षा गरेअनुसार चल्ल सकेनन् । शरदले दुई खेलमा मात्र प्लेइङ–११ मा मौका पाएका थिए ।
विशेषगरि कमजोर मानिने ब्याटिङमा आसिफ, कुशल भुर्तेल र रोहितले नेपाललाई थप नयाँ उर्जा र आशा देखाएर फर्किएका छन् । रोहितले पिएनजीसँगको दोस्रो खेलमा ८६ र अमेरिकासँग ६२ रनको इनिङ खेलेका थिए । कुशलले अमेरिकालाई हराउन ८४ रन बनाए । ओमानसँग पराजित भएपनि आसिफले ९० रनको इनिङ खेलेका थिए । यी युवा खेलाडी आगमी दिनमा अनुभव बढ्दै जादा अझ उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने छन् ।
३. खेलाडीमाथि विश्वास र धैर्यता
यस पटक नेपालले युवा खेलाडीमाथि विश्वास र धैर्यता देखाएको छ । यसअघि एक वा दुई खेल खराब प्रदर्शन गरेपछि नेपालले खेलाडीलाई मौका निकै कम दिने गर्दथ्यो । खेलाडी आफ्नो कमजोरी सुधार गर्न नपाउँदै टोली बाहिर हुनुपर्ने समस्याको रुपमा थियो । त्यसले खेलाडीको आत्माविश्वास र मनोबलमा ठूलो असर पुग्ने गर्दथ्यो । तर यस पटक नेपालले खराब प्रदर्शनका बाबजुद पनि खेलाडीमाथि थप विश्वास र धैर्यता देखाइरह्यो ।
कुशल मल्ल सुरुवात देखिनै चल्न सकेनन् । लगातार तीन खेलमा १-१ रनमा आउट भएपछि पनि नेपालले उनलाई मौका दिएको थियो । त्यसपछि थप दुई खेलमा पनि चल्न नसकेपछि अन्तिम खेलमा ड्रप गरेको थियो । सोमपाल कामी लगातार चार खेलमा विकेटविहिन बने । टोलीका उत्कृष्ट विकल्पनै त्यहिँ हुन् भने थप मौका दियो । खेलाडी आफूलाई प्रमाणित गर्न चुके । एक खेलमा खराब प्रदर्शन गर्दैमा टिममा पर्दैन कि भन्ने दबाब यस पटक रहेन । टिमले अव खेलाडीमाथि धैर्यता र विश्वास देखाउँछ भन्ने राम्रो सन्देश पनि दियो ।
२. रोहितको राम्रो पूनरागमन
ओमान भ्रमणमा रोहितले टोलीमा उत्कृष्ट पूनरागमन गरे । २०२० फेब्रुअरीमा टोलीबाट बाहिरिएका रोहितले पपुवा न्युगिनीविरुद्ध पहिलो खेल जिताउन ४१ रनको महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए । दोस्रो खेलमा ८६ रनको इनिङ खेले । अमेरिकालाई ५ विकेटले पराजित गर्दा रोहितले ६२ रनको अविजित इनिङ खेलेका थिए ।
ओमानसँग खेलमा २० रनमा आउट भएका थिए । १९ वर्षिय युवा ब्याट्सम्यान रोहितले टोलीमा परिपक्क प्रदर्शन गरे । दीपेन्द्र सिंह ऐरी घाइते भएपछि चौथो नम्बरमा मौका पाएका उनले भरपूर्ण फाइदा उठाए । रोहितले यसअघि पनि नेपालको जितमा अहम भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए । रोहितको जिम्मेवारी र फर्किएको लय टोलीको एक सकरात्मक पक्ष रह्यो ।
१. ओपनिङ समस्यामा सुखद संकेत
ओपनिङ नेपालले पछिल्लो पाँच वर्षमा भोगेको सबैभन्दा ठूलो समस्या र अस्थिर भूमिका हो । हरेक प्रतियोगिता र खेलमा नेपालले ओपनर परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । ओपनिङ समस्यामा युवा खेलाडी आसिफ शेख र कुशल भुर्तेलले राम्रो समाधानको संकेत दिएका छन् । टि२० त्रिकोणात्मक सिरिजमा सफल प्रदर्शनपछि नेपालले ओडिआईमा पनि प्रयोग गरेको थियो । दुवैले अवसरको सदुपयोग गर्दै राम्रो प्रभाव छाड्न पुगे । डेब्यूको पहिलो खेलमै आसिफ र कुशलले ४६ रनको साझेदारी गरेका थिए ।
अमेरिकासँग पहिलो खेलमा ६६ रनको साझेदारी गरेका थिए । जुन नेपालबाट ओडिआईमा पहिलो विकेटका लागि भएको उच्च साझेदारी हो । उक्त खेलमा कुशलले ८४ रनको इनिङ खेलेका थिए । ओमानसँग आसिफले ९० रनको उत्कृष्ट इनिङ खेले । कुशल नचलेको दिनमा आसिफ र आसिफ नचलेको दिनमा कुशल चले । लामो समयपछि ओपनिङमा आसिफ र कुशलले दीर्घकालिन समाधानको संकेत दिएर फर्किएका छन् ।